विहीबार भगवान विष्णुको व्रत बस्दा के फल प्राप्ति हुन्छ ? (पूजा विधिसहित) – " कञ्चनजंगा News "
No Comments on विहीबार भगवान विष्णुको व्रत बस्दा के फल प्राप्ति हुन्छ ? (पूजा विधिसहित)
दरबारमा सुख मिल्न थाल्छ । परदेश गएका राजा पनि फिर्ता आउँछन् । अतः विहीबारको दिन व्रत बसेको खण्डमा सम्पत्ति तथा वैभव प्राप्त हुने जनविश्वास रहँदै आएको छ ।
← महराको निवेदनउपर उच्च अदालतमा आज सुनुवाइ → आइपिएस अधिकृतले बलिउड अभिनेता फरहान अख्तरलाई कारवाही गरिनुपर्ने बताए